`Waxaan u dheelaa kooxda qaranka Ghana oo aan waardiye u ahaan jiray` - BBC News Somali
`Waxaan u dheelaa kooxda qaranka Ghana oo aan waardiye u ahaan jiray`
Lahaanshaha sawirka Samuel Sarfo
Image caption Samuel Sarfo wuxuu waardiye u ahaa kooxda qaranka Ghana oo hadda u ciyaara.
Askeri reer Ghana ah oo waardiye u ahaan jiray kooxda xulka Qaranka ayaa BBC-da u sheegay in uu ugu dambeyntii u ciyaaray kooxdaasi ciyaar caalami ah, isagoo taasi ku tilmaamay "Riyo u rumowday".
Samuel Sarfo wuxuu markii ugu horreysay u ciyaaray kooxda Black Stars (Xidigaha Madow), wuxuuna bedel ku soo galay daqiiqaddii 81-aad, kulankaas oo Ghana ay Mareykanka uga badisay 2-1.
``Waxay ahayd riyo ii rumowday. Waa riyada qofkastoo dhallinyaro oo ku koray Gahan uu qabo``
Wuxuu sheegay in ciyaaryahanka dhexda ka ciyaaro Emmanuel Agyemang-Badu, kaas oo lala sawiray sanadkii tagay asigoo xiran dharka booliska markii uu waardiyaha ahaa in uu aad u taageeray, inkastoo Agyemang-Badu uusan hadda kooxda ka mid ahayn".
Image caption Sarfo oo la sawiran ciyaaryahanka dhexda ka ciyaaro Emmanuel Agyemang-Badu, sandkii hore.